android ဖုန်းအဘို့စင်ကြယ်သောဖလက်ရှမီး Widget လေး APK ကို | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » စင်ကြယ်သောဖလက်ရှမီး Widget လေး
စင်ကြယ်သောဖလက်ရှမီး Widget လေး APK ကို
စင်ကြယ်သောနဲ့ရိုးရိုးလက်နှိပ်ဓာတ်မီး widget က။ ဒါဟာကင်မရာ flash ကို LED ပြောင်းသည်။ မဆိုလိုက်တယ်ခွင့်ပြုချက်တောင်းမရ, အဘယ်သူမျှမနှောင့်နှေးနှောင့်အယှက် app ကိုဖွင့်မယ့်သူကပြောတယ်ရိုးရှင်းပြီးရှာနေကောင်းသော Toggle အားခလုတ်ကို! အကွိမျမြားစှာရရှိနိုငျစတိုင်များ, lockscreen (keyguard) ဝစ်ဂျက်များနှင့် launcher ဖြတ်လမ်း (app တစ်ခုအိုင်ကွန်တူ) ကိုလည်းထည့်သွင်းထားပါသည်။ နောက်တဖန်အဘယ်သူမျှမ APPLICATION သို့ကြောင့်သာ widget ရဲ့ရှိ၏🙂
ကင်မရာ access ကိုခွင့်ပြုချက်မီးရှူးတိုင် mode ကိုအတွက် flash ကိုဖွင့်လှစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဖလက်ရှမီးခွင့်ပြုချက် (ထို Google က !! fix) လုံလောက်သောမဟုတ်ပါဘူး။
အခါ screen ကိုပိတျသော့ခတ်ခွင့်ပြုချက် (အပေါ်, အရှင်ကင်မရာ flash ကို) ရက်နေ့တွင် (မှိန်) အပေါ်မျက်နှာပြင်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် CPU ကိုအသုံးပြုသည်နိုး။ တချို့ဖုန်းတွေမှာတော့လူတိုငျးအတှကျအလုပျလုပျမပြုစေခြင်းငှါဒါဖုန်းကိုအိပ်စက်ခြင်းထားသောအခါ HTC ရဲ့လုံးဝကင်မရာဟာ့ဒ်ဝဲပိတ်အဖြစ်။
သတိပေးခြင်း !! အဆိုပါဝစ်ဂျက်အဖြစ် "လျင်မြန်စွာ mode ကို" ကိုအသုံးပြုပြီးအလုပ်လုပ်နေရပ်တန့်စေခြင်းငှါ, အခါက Nexus5တူသောအချို့ကိရိယာများပေါ်တွင် (ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ကို turn off မဟုတ်) သတိထားပါ။ ဤကိစ္စတွင်၌သင်တို့ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့် readd သည့်ဝစ်ဂျက်များနှင့်လျင်မြန်စွာ Mode ကိုပယ်စွန့်ခွာဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ငါသာ Nexus4ရှိစဉ်ကတည်းကအများအပြားကိရိယာများပေါ်တွင်စမ်းသပ်ဒါကြောင့်သင်က bug ကိုကြုံတွေ့ရလျှင်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ငါ့ကိုပြောပြခြင်းနှင့်ငါက fix ငါ့အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးလိမ့်မယ်ကျေးဇူးပြုပြီးနိုင်ဘူး။
သငျသညျအကြှနျုပျကိုထောကျပံ့ပေးရန်ဆန္ဒရှိလျှင် app ကိုအတွင်းအပြင်လှူဒါန်းခလုတ်ကို🙂
အန်းဒရွိုက်လိုအပ်သည်: 3.0 နှင့်တက်